किन यसपालि हिउँदमा पानी पर्न सकेको छैन ? - Punhill Online
३ माघ २०७७, शनिबार २०:०६ मा प्रकाशित (1 महिना अघि)
यसपालि नेपालमा लगभग पानी नै नपरेको अवस्था भएको मौसमवदि्हरूले बताएका छन्। “क्लाइमेट भेरिएबल भन्ने हुन्छ। त्यो भनेको अघिल्लो वर्ष जस्तो थियो यो वर्ष पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन,” जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखका कार्यरत वरिष्ठ मौसमविद्‌ विभूति पोखरेलले बताईन ।
साथै यो हिउँदमा अहिलेसम्म पश्चिमी वायुको प्रभाव पनि सशक्त नदेखिएकोले पानी नपरेको बताईन । उनका अनुसार अहिले वर्षा नहुनु एउटा मौसमी प्रक्रिया भए पनि हिउँदे बालीको हकमा सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था नरहेको नेपालमा लगाइने हिउँदे बालीदेखि बर्खे बालीसम्मका लागि किसानहरू मुख्यतया वर्षामा नै भर पर्छन्।
“अहिले पानी नपर्दा त्यसको असर हिउँदे बालीहरू गहुँ, तोरी र आलुको उत्पादकत्वमा पर्छ। उदाहरणका लागि गहुँमा गाँज कम आउँछ जसले गर्दा उत्पादन कम हुनसक्छ,” गहुँ प्रजननविज्ञ डा. ध्रुवबहादुर थापाले भने।
माघ महिनाको मध्यसम्ममा पनि पानी परिदियो भने केही हदसम्म हिउँदे बालीको उत्पादकत्वमा अलि असर कम हुने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। थापाका अनुसार हिउँदमा पर्याप्त पानी परेको गत वर्ष नेपालमा २० लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो।